Zanak'i Lebron James - Nanao match Lycée voalohany - ewa.mg
Zanak’i Lebron James – Nanao match Lycée voalohany
Basket - Sport - Zanak’i Lebron James – Nanao match Lycée voalohany
Ho an'ny match voalohany nataony ho an'ny Lycée Crossroads any Santa Monica tamin'ny alatsinainy, i LeBron James Jr, na « Bronny »,dia nahavita tsara ny fiandohany satria ny zanak'i Lebron izay 14 taona,
dia namono 27 points tamin'ny fandreseny an'ny ekipan'ny Culver City Middle School.
Nivoaka tamin'ny : 05/12/2018
Voka-dalao 7 Decembre 2018 – Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs
Spurs / 133 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Aldridge 23 6/16 0/0 2/2 3 5 8 1 3 0 0 1 14 14 D. Cunningham 27 3/8 2/5 0/0 1 6 7 4 0 1 1 0 8 14 R. Gay 26 4/8 2/4 0/0 1 5 6 2 1 2 3 1 10 14 D. DeRozan 36 11/20 0/0 14/18 1 7 8 9 1 0 1 2 36 41 B. Forbes 18 4/8 0/4 3/3 1 1 2 2 1 1 0 0 11 12 C. Metu 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q. Pondexter 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Bertans 21 4/7 4/7 1/1 0 3 3 1 3 0 0 0 13 14 J. Poeltl 24 5/6 0/0 4/4 2 6 8 2 5 0 3 3 14 23 D. White 8 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 3 P. Mills 29 4/9 2/5 4/5 0 1 1 5 3 0 1 0 14 13 M. Belinelli 27 4/8 3/6 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 11 11 Total 46/91 13/31 28/33 9 39 48 27 18 4 10 7 133 Lakers / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Kuzma 39 12/22 2/7 1/2 0 8 8 2 3 2 2 0 27 26 L. James 37 13/28 3/8 6/9 2 6 8 11 4 2 1 0 35 37 J. McGee 24 4/6 0/0 4/4 6 6 12 0 1 0 2 1 12 21 L. Ball 38 5/16 2/6 1/1 1 3 4 11 3 1 2 0 13 16 J. Hart 36 3/8 0/5 1/1 0 5 5 0 3 0 0 0 7 7 M. Beasley 8 2/5 0/1 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 4 2 T. Chandler 19 1/1 0/0 2/2 0 4 4 0 3 1 1 0 4 8 I. Bonga 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. Mykhailiuk 11 2/3 2/3 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 6 6 L. Stephenson 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. Caldwell-Pope 27 4/11 2/6 2/2 0 0 0 0 2 2 0 0 12 7 Total 46/100 11/36 17/21 10 33 43 24 24 8 8 1 120
NBA – Voka-dalao 20 Nov 2018 – Miami Heat vs Brooklyn Nets
Heat / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. McGruder 36 7/14 1/4 0/0 2 3 5 4 0 0 3 0 15 14 D. Jones Jr. 17 1/6 1/3 0/0 1 3 4 0 3 0 2 1 3 1 H. Whiteside 32 9/21 0/1 3/6 11 12 23 0 3 1 3 2 21 29 W. Ellington 33 2/8 2/8 3/3 0 1 1 2 2 1 0 1 9 8 J. Richardson 39 6/20 0/5 4/7 0 4 4 5 2 2 3 0 16 7 J. Johnson 23 1/7 0/2 2/2 1 2 3 4 5 0 0 0 4 5 J. Winslow 17 4/7 2/3 0/0 1 1 2 1 3 0 1 0 10 9 D. Robinson 12 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 B. Adebayo 16 3/6 0/0 0/0 2 6 8 0 2 1 1 1 6 12 D. Wade 14 2/8 0/3 1/2 0 2 2 2 3 0 1 1 5 2 Total 36/100 7/32 13/20 18 34 52 18 24 5 14 6 92 Nets / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Dudley 22 0/5 0/3 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -4 J. Harris 28 4/10 0/5 3/4 0 3 3 0 3 0 1 0 11 6 J. Allen 30 5/8 0/0 3/4 5 9 14 2 2 0 0 2 13 27 D. Russell 32 9/22 2/8 0/0 0 9 9 6 1 4 3 1 20 24 A. Crabbe 29 2/8 2/5 2/2 1 4 5 0 3 0 0 0 8 7 E. Davis 18 4/4 0/0 1/2 3 5 8 1 4 0 2 1 9 16 R. Hollis-Jefferson 26 3/9 0/1 4/6 3 4 7 0 2 0 2 0 10 7 D. Carroll 16 3/5 2/3 3/4 0 3 3 0 1 1 1 0 11 11 S. Dinwiddie 30 5/12 2/5 4/4 0 2 2 7 2 1 2 0 16 17 S. Napier 9 3/5 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 6 6 Total 38/88 8/31 20/26 13 40 53 17 21 6 11 4 104
Tenisy- «BMOI Premium Challenge»: novaina ny endriky ny fifaninanana
Iray volana mialoha ny hanombohan’ny «BMOI Premium Challenge», taranja tenisy, natao ho an’olon-droa miaraka, lahy sy vavy, isika ankehitriny. Fihaonana hotanterahina, eny amin’ny kianja Country Club Ilafy, ny 25 sy ny 26 mey ho avy izao. Nisy ny fanovana ny endriky ny fifaninanana. Nofoanana ny tabilao iarahan’ny ray sy ny zanaka ka novaina ho tabilao ho an’olon-droa miaraka lehilahy, nozaraina ao anaty sokajy «steel» sy «titanium», arakaraka ny taon’ny mpifaninana.Zava-baovao amin’ny fitsipika mifehy ny lalao koa ny tsy fisian’ny «no ad», izany hoe, tsy misy «avantage» intsony raha mitovy ny isa fa mivoaka ho mpandresy ny mahazo isa voalohany.Toy izany koa ny «balle let» na ny baolina mikasika ny harato, aorian’ny “service”, azon’ny iray amin’ireo mpilalao mpifanandrina raisina.Manampy izany ny fisian’ny «point orange». Omen’io orinasan-tserasera io fahana ny ekipa mahazo isa voalohany, raha toa ka mitovy ny tarehimarika ao anatin’ny fe-potoana hilalaovana, maharitra 15 mn indroa miditra.Hotoloran’ny Orange fanomezana ny ekipa mandrombaka fandresena be indrindra amin’ny alalan’ny “point decisif”.Torcelin L’article Tenisy- «BMOI Premium Challenge»: novaina ny endriky ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.
63 taon’ny CBT: mitohy hatrany ny fankalazana
Miditra amin’ny andro faharoa amin’ny fifaninanana “Doublette equilibrée” ny eo anivon’ny klioba CBT (Club des boulistes de Tananarive), ny asabotsy sy alahady ho avy izao etsy amin’ny toeram-pilalaovana Mahamasina. Natao izao fifaninanana izao hanamarihana ny faha-63 taon’ny CBT ary hampivondronana ihany koa ireo mpilalao tsipy kanetibe, na lahy, na vavy. “Tanjona ny hampiroboroboana ny taranja tsipy kanetibe, eo anivon’ny klioba CBT. Anton’izao lalao izao indrindra izany. Efa vina napetraka nandritra izay 63 taona izay izany”, hoy ny fanazavana nentin-dRaheriniaina Yves, filohan’ny CBT. “Ary ao anatin’izany fifaninanana izany, ezahina hatrany ny haha matihanina, na ny eo amin’ny fitsipika izany, na eo amin’ny fahaizan’ny mpilalao tsirairay”, raha ny fanazavana hatrany. Raha tsahivina, nisongadina ny ekipan’i Tsialonina sy i Solofo, nandritra ny fifaninanana ny andro voalohany notanterahina ny asabotsy sy alahady lasa teo. Nanao pao-droa ireto farany ary tena nampiseho ny fahaizany tokoa. Lavony tamin’ny isa 13 no ho 7 i Miandritiana sy i Stephano, ary isa 13 no ho 8 kosa ny nandavoan-dry Tsialonina sy i Solofo ny tarik’i Tendry sy i Naivo. Mi.RazL’article 63 taon’ny CBT: mitohy hatrany ny fankalazana a été récupéré chez Newsmada.
Fanampiana-Lalao Olympika: nanokana 800 tapitrisa dolara ny CIO
Araka ny efa notaterina teto, nifampidinika ny amin’ny hanampiana ny federasiona iraisam-pirenena sy ny komity mpikarakara ny lalao Olympia, ny avy eo anivon’ny Komity Iraisam-pirenena Olympia (CIO). Dinika natao indrindra hanarenana ny krizy ara-bola nanomanana iny lalao Olympika tsy tanteraka iny. Vokatr’izany, nanokana vola mitentina 800 tapitrisa dolara ny CIO ka ny 650 tapitrisa dolara ho an’ny fanomanana ny lalao olympika, nahemotra ho amin’ny taona 2021 ary ny 150 tapitrisa dolara kosa ho an’ireo federasiona iraisam-pirenena.Tafalatsaka anaty krizy tanteraka, ankehitriny, ny fanatanjahantena maneran-tany, raha ny fomba fijerin’ireo mpahay toe-karena eo amin’ny lafiny fanatanjahantena. Mikatona avokoa izao ny hetsika ara-panatanjahantena rehetra vokatry ny fiparitahan’ny Covid-19. Na misy aza ny fifaninanana, tsy maintsy hatao tsy misy mpijery izany ary miditra fatiantoka ny mpikarakara, ny karaman’ny mpilalao etsy an-daniny. Izao olana izao izay mbola baraingo ny famahana izany aorian’ny fihibohana sy ny fitsaharan’ity valanaretina Coronavirus ity.Mi.RazL’article Fanampiana-Lalao Olympika: nanokana 800 tapitrisa dolara ny CIO a été récupéré chez Newsmada.
Ligue 1 – Résumé Andro faha 16 – 5 Decembre 2018
Ligue 1 Conforama - Saison 2018/2019 - Andro faha 16 Amiens SC - AS Monaco (0-2) OGC Nice - Angers SCO (0-0) Montpellier Hérault SC - LOSC (0-1) Girondins de Bordeaux - AS Saint-Etienne (3-2) SM Caen - Nîmes Olympique (1-2) Dijon FCO - EA Guingamp (2-1) Olympique Lyonnais - Stade Rennais FC (0-2) FC Nantes - Olympique de Marseille (3-2) Stade de Reims - Toulouse FC (0-1) RC Strasbourg Alsace - Paris Saint-Germain (1-1) Buteurs : Radamel FALCAO (43' pen - AS Monaco) / Radamel FALCAO (90' +6 pen - AS Monaco) / Nicolas PEPE (6' - LOSC) / Loïs DIONY (16' - AS Saint-Etienne) / Jimmy BRIAND (22' - Girondins de Bordeaux) / François KAMANO (57' pen - Girondins de Bordeaux) / Wahbi KHAZRI (67' - AS Saint-Etienne) / PABLO (90' - Girondins de Bordeaux) / Umut BOZOK (18' - Nîmes Olympique) / Prince ONIANGUE (90' - SM Caen) / Loïck LANDRE (90' +5 - Nîmes Olympique) / Benjamin JEANNOT (14' - Dijon FCO) / Marcus COCO (79' - EA Guingamp) / Oussama HADDADI (86' - Dijon FCO) / Hatem BEN ARFA (41' - Stade Rennais FC) / Jordan SIEBATCHEU (43' - Stade Rennais FC) / Morgan SANSON (28' - Olympique de Marseille) / Emiliano SALA (30' - FC Nantes) / Florian THAUVIN (36' pen - Olympique de Marseille) / Abdoulaye TOURE (45' +1 - FC Nantes) / Gabriel BOSCHILIA (63' - FC Nantes) / Issiaga SYLLA (45' - Toulouse FC) / Kenny LALA (40' pen - RC Strasbourg Alsace) / Edinson CAVANI (71' pen - Paris Saint-Germain) Cartons rouges/exclusions : Bakaye DIBASSY (Amiens SC) / Ludovic BUTELLE (Angers SCO) / Wesley LAUTOA (Dijon FCO) / Manuel GARCIA (Toulouse FC)
Handball – CCOI: hangotraka ny lalao famaranana
Hifarana, anio asabotsy 1 desambra, ny fiadiana ny “Amboaran’ny ranomasimbe Indianina”, taranja handball. Lalao famaranana hifanandrinan’ny ekipa malagasy vehivavy, ny THBC, sy ny ekipan’ny Tamponnaise, reonionezy. Ny Chateau Morange, reonioney, sy ny ASC Tsingoni avy any Mayotte kosa ny hifampitàna, ho an’ny sokajy lehilahy. Hafana vay ny ady eo amin’ireto lalao famaranana ireto satria kalaza avokoa ny tafakatra. Samy nisongadina sy nahita fandresena hatrany ireo ekipa tafakatra ireo. Ho an’ny THBC manokana, anisan’ny nahazoany toerana ary nahatonga azy amin’izao lalao famaranana izao ny nandavoany ny ekipan’ny Cap Sister, avy any Seychelle, tamin’ny isa mavesatra 23 no ho 9. Hangotraka ihany koa ny lalao eo amin’ny lehilahy, hifanandrinan’ny Chateau Morange sy ny AS Tsingoni. Ireto farany izay nanao ady sahala 23 no ho 23 tamin’ny lalao, ny alakamisy lasa teo. Ankoatra izay, hitohy, anio, ny lalao fiadian-toerana fahatelo ho an’ny vehivavy, eo amin’ny ASSM sy Saint Pierre. Mi.Raz Valin-dalao omaly: ASC Tsingoni (May) 30 – 18 ASCP Vacoas (Mau) Cosfa (Mad) 33 – 21 Durantha (Sey) Chateau Morange (Reu) 24 – 17 Saint Pierre HBC (Reu) Fiadian-toerana fahatelo vehivavy: PC Boueni (May) 29 – 28 AS Tsiky (Mad) Lalao anio: Famaranana : V: THBC (Mad) vs Tamponnaise (Reu) L: Chateau Morange (Reu) vs Tsingoni (May) 3e (V) : ASSM (Mad) vs Saint Pierre (Reu) L’article Handball – CCOI: hangotraka ny lalao famaranana a été récupéré chez Newsmada.
“Slalom 2018”: manana tombony Rakotomiarana Tsiory
Hotontosaina, ny 8 sy ny 9 desambra izao eny amin’ny TMF Ivato, ny dingana faha-7 sady farany amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2018, “Slalom”. Fifaninanana karakarain’ny klioba ACCT. Milaza ny fahavononany avokoa ireo mpandray anjara rehetra ary samy hiady ny ho lohany. Manana tombony Rakotomiarana Tsiory miohatra amin’ireo mpanamory hafa, raha jerena ny isa efa eo am-pelatanany. Manana isa 129 izy amin’izao, taorian’ny dingana enina nifaninanana. Nahazoany fandresena avokoa ny dingana dimy amin’ny enina raha atao ny jety todika. Nanamarika isa ambony hatrany i Tsiory nandritra ireo dingana ireo. Nisantatra ny fandresena rahateo izy tamin’ny “Slalom” voalohany, nokarakarain’ny TMF Rally, nahazoany isa 25. Toy izany koa ny tamin’ny “Slalom” MSA sy FMMSAM ka nahazoany io isa ambony 25 io. Azo lazaina ho mazava, araka izany, ny lalany amin’ny fisalorana ny anarana maha tompondaka amin’ity taona ity. Laharana faharoa manaraka an’i Tsiory Rasoamaromaka Mika, manana isa 83. Na ambony aza io isany io, ho sarotsarotra ny hanenjika an’i Tsiory noho ny elanelan’isa mifanalavitra. Mbola ny zana-dRasoamaromaka, i Faniry, ihany koa ny eo amin’ny laharana fahatelo, amin’ny filaharana ankapobeny vonjimaika ary manana ny isa 74. Na efa tazana aza ny fahombiazana ho an’i Tsiory, mbola samy miandrandra fandresena avokoa ireo mpanamory mpandray anjara, amin’ity dingana faha-7 farany amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2018, “Slalom”, ity. Mi.Raz Filaharana ankapobeny, taorian’ny dingana faha-6, “Slalom 2018” 1-Rakotomiarana Tsiory: 129 2-Rasoamaromaka Mika: 83 3-Rasoamaromaka Faniry: 74 4-Rajemison Aro Kiady: 43 5-Rabekoto Adriani: 42 6-Rahamefy Teddy: 27 7-Raharinosy Stenio: 15 8-Rabesaotra Mickael: 10 9-Ramiarijaona Tsitohaina: 8 10-Louvel Mickael: 7L’article “Slalom 2018”: manana tombony Rakotomiarana Tsiory a été récupéré chez Newsmada.
NBA – Voka-dalao 28 Novembre 2018 Dallas Mavericks vs Houston Rockets
Rockets / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Tucker 35 2/7 1/6 0/0 2 2 4 1 3 2 0 0 5 7 J. Ennis III 32 8/13 2/4 0/0 2 1 3 1 4 0 1 0 18 16 C. Capela 33 9/12 0/0 0/2 5 3 8 2 2 0 1 2 18 24 J. Harden 37 7/15 4/11 7/9 1 10 11 17 4 6 8 0 25 41 E. Gordon 34 6/15 3/10 2/3 0 1 1 3 1 0 3 2 17 10 G. Clark 20 0/5 0/4 0/0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 0 M. Chriss 7 1/1 0/0 0/1 1 1 2 1 1 0 0 0 2 4 I. Hartenstein 11 1/2 1/1 2/2 2 1 3 0 4 0 1 0 5 6 D. House Jr. 23 6/13 2/8 4/6 2 3 5 1 4 0 1 0 18 14 M. Carter-Williams 7 0/4 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -4 Total 40/87 13/45 15/23 15 23 38 28 26 10 16 5 108 Mavericks / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval H. Barnes 29 5/14 3/5 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 13 7 L. Doncic 24 6/11 3/7 5/5 2 4 6 2 2 1 4 0 20 20 D. Jordan 24 4/5 0/0 5/8 2 5 7 1 1 0 3 2 13 16 D. Smith Jr. 31 4/8 1/3 1/2 1 4 5 5 2 4 3 1 10 17 W. Matthews 23 5/9 1/3 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 11 7 D. Powell 19 3/4 0/1 0/0 0 3 3 0 3 1 0 1 6 10 M. Kleber 18 3/4 2/3 1/2 1 1 2 1 3 0 0 0 9 10 D. Finney-Smith 27 3/9 1/3 0/0 2 1 3 0 3 3 0 1 7 8 S. Mejri 4 2/3 0/0 2/2 1 3 4 0 1 0 0 0 6 9 D. Harris 15 6/8 5/6 3/3 0 1 1 4 2 0 0 2 20 25 J.J. Barea 18 5/9 1/2 2/2 0 3 3 12 0 1 1 0 13 24 J. Brunson 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 R. Broekhoff 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 46/85 17/34 19/24 10 27 37 27 17 10 14 7 128
Ligue des Champions – Voka-dalao 27 novembre 2018 Man United vs Young Boys